ကလေးအိပ်ခန်းများအတွက်မူထူးခြားတဲ့မတ်ဘဝ Humidifier China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:အိပ်ခန်းအတွက် Smart Humidifier,ကလေးစမတ် Humidifier,စမတ်ဘဝ Humidifier
Home > ထုတ်ကုန်များ > စမတ် Humidifier > ကလေးအိပ်ခန်းများအတွက်မူထူးခြားတဲ့မတ်ဘဝ Humidifier
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 175mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 370mm / 12pcs
အင်္ဂါရပ်များ & HIGHLIGHTS
အသံနှင့် app ကိုထိန်းချုပ် - on / off ကိုဖွင့်ဖို့စမတ် humidifier ပညတ်နဲ့ Amazon ပဲ့တင်သံသို့မဟုတ် Amazon ပဲ့တင်သံအစက်အားဖြင့်သင်တို့၏အသံသည်အားဖြင့်ဦးဆောင်အရောင်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရဲ့ Alexa app ထဲမှာစမတ်နေအိမ်ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. ။ ဒါမှမဟုတ်အလင်းတောက်ပမှုကိုညှိခြင်း, ဦးဆောင်အရောင်များပြောင်းလဲဘယ်နေရာမှာမဆို app ကိုနှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များမှတဆင့် on / off ကိုဖွင့်ကနေထိန်းချုပ်ဖို့, မိုဃ်းတိမ်ကို output ၏ခွန်အားညှိအလုပ်လုပ်အချိန်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဦးဆောင် flash ကို Modes သာပြောင်းပေးပါ။
အလွန်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ - ultrasonic နည်းပညာညဉ့်လုံးလေထုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်သင့်အိပ်ဘို့နီးပါးသုညဆူညံသံအဆင်ပြေအာကာသစောင့်ရှောက်။ စမတ်ပျံ့ရေကိုထွက်ပြေးလာသောအခါသင်အိမ်မှာကျန်ရစ်သည့်အခါကကို turn off ဖို့မေ့လျော့ဖို့မစိုးရိမ်ပါအလိုအလျှောက်ပိတ်လိမ့်မယ်။ ul အတွက်လုံလောက်အောင်များနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပါဝါ (DC က 24V 650mA) ကိုထောက်ပံ့ပေးပါဝါအဒက်အတည်ပြု
အကြီးစားသိုလှောင်မှု & ခိုးအငွေ့ output ကိုစွမ်းရည်မြှင့် - 400Ml ရေသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် 30-60Ml / ဇအခိုးအငွေ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် 12 နာရီအထိအလုပ်လုပ်နေပါကစောင့်ရှောက်, Smart အနံ့ပျံ့သင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုံအလောက်အစိုဓာတ်ကိုလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောနိုင်ကြောင်းသေချာ။ သင်သည်သင်၏ခံစားချက်အပန်းဖြေဖို့မောအနံ့ကိုပေးတဲ့ရေတိုင်ကီထဲသို့3~5ပေါက်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီယို။ ဒါဟာအဆီများမရှိဘဲအနံ့ humidifier အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
multi-အရောင်များကိုညဥ့်အလင်းအိမ်ဦးဆောင်တဲ့ - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့သင်တို့အရောင်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုရှေးခယျြသို့မဟုတ်တဦးတည်းအရောင် fix နိုင်ဘူး။ အရောင်ပျော့အလင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းသင်ပင်ပန်းခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောဖယ်ရှားပစ်ရကိုကူညီမယ့်, စိတ်ပြေလျော့နွေးနှင့်ရင်ခုန်စရာလေထုဖန်တီးနှင့် wifi humidifier သင်၏မျက်စိနဲ့အခန်းထဲမှာနထေိုငျအိပ်ခန်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောညဥ့်အလင်းအိမ်, လေ့လာမှုအခန်းတစ်ခန်း, ရုံးများအတွက်သင့်လျော်သောအဘို့လည်းဖော်ရွေဖြစ်ပါတယ်မယ်လို့ စသည်တို့ကို spa အခန်းထဲမှာ
သင်သည်အဘယ်သို့ရ: 1 x ကိုအနံ့ပျံ့, 1 x ကိုပါဝါအဒက် (ul အတည်ပြုခဲ့), ခွက်ကိုတိုင်းတာခြင်း 1 x ကို 1 x ကိုအင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူကို manual
Google ပင်မစာမျက်နှာ Alexa စမတ်တီထွင်မှု Aroma Air Humidifier
Smart Home အက်ပလီကေးရှင်း၊ အသံထိန်းချုပ်မှု Aroma Diffuser UK
ခရီးသွားခြင်းအတွက် Smart Life App Diffuser Humidifier Wifi
အိပ်ခန်း Big အခန်းများအတွက် Smart Control Vaporizer Humidifier
Alexa Clean Mist စမတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှုစိုထိုင်းဆ
လေကြောင်းဆန်းသစ်မှု Eco Friendly စမတ်ရေငွေ့ပျံစိုထိုင်းမှု
Alexa Compatible လုံးလုံးစမတ်ရေမြူစိုထိုင်းဆ
အိပ်ခန်းအတွက် Smart Humidifier
အိပ်ခန်းများအတွက် Usb Humidifier
အိပ်ခန်းများအတွက် Air ကို Humidifiers
ကလေးငယ်များအတွက် Air Humidifier
အရည်အသွေးမြင့် Air Humidifier